Talooyin Top Waayo, Iyadoo Your Xayawaanka Socdaalka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Talooyin Top Waayo, Iyadoo Your Xayawaanka Socdaalka
Kuwani Talooyin Top for Tegay xayawaankaaga guriga waa in uu kaa caawiyo yareynta walaacaaga. Maxaa yeelay, aynu u wajihi, Tegay xayawaankaaga guriga waa walaaca! Laakiin waxa ay ka caadadis, waa fikirka ka tagidaada xayawaanka guriga ama daryeelka dadka kale. Sida iska cad, qofna kuma ilaaliyo iyaga sida aad adigu u shaqeyso! Right?
Waxaa jira fursado badan oo waxa la sameeyo marka aad guriga ka maqan safarka. hotels Dog, shaqaalaynta ilaaliye, ama wareejinta culeyska, inkastoo mid ka mid ah cute, si aad saaxiib ka mid ah doorashooyinka ay yihiin. Kuwani waa kuwa ugu badan in dadka door biday in ay. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood ma jiraan wax ikhtiyaar kale oo aad leedahay si aad u safri xayawaanka. Inkasta oo ay noqon karaan kuwo hab adag, Save A tareenka ayaa qaar ka mid ah talooyin top kaa caawin doonaa inta aad Tegay xayawaanka!
Butros Talooyin 1: Soo qaado Daweeyo A!
Safrin meel qasac cusub oo noqon doona culays xayawaankaaga. Sidaas in la hubiyo in uu weli sidii dabacsan sida ugu macquulsan fure u tahay safar raaxo u leh qof kasta ku lug. Soo qaado alaabta lagu ciyaaro si joogto ah isaga ama iyada, bustayaal, iyo waxyaabaha kale ee eygaaga ama bisadaada ka dhigi kara mid raaxo leh. waxay ahaayeen kuwo is dajiyaan oo aan wax qalad ah samayn? Hubi in aad ka abaalmarinaynaa si ay u sameeyaan Tegay xayawaanka raaxo badan mustaqbalka.
Butros Talooyin 2: laakiin ma aha Sidoo kale Daaweysey Dad badan oo…
Waxaan dareemayaa sida tani waa cad, laakiin waan u tegayaa inaan u qeexaa idiin kasta! Ha siin cuntada culus amase ha cabbo biyaha aad u badan si aad xayawaanka ma yeelan doonaan rabitaanka in ay u gargaarto kaalinta xun! (Maanaan digo in Tegay xayawaanka aad noqon kartaa adag!)
Butros Talooyin 3: Jimicsiga
Haddii aad jeceshahay ama ma, Tilmaamahan ugu sareeya ee kula socdaalka xayawaankaaga guriga waxay ka dhigan tahay inaad sameyn doontid nooc jimicsi ah! Ka hor inta aadan bilaabin safarka, u qaadan, waayo, qaar ka mid ah jimicsi xooggan! Sababta oo ah socod dheer oo dheeraad ah ama kenaan u daran oo aad saaxiib qalafsaneyn la jecel yahay, isaga ama iyada waxaa laga yaabaa in kaliya aad u daalan walwalo waxyaalaha. haddii aad heshay bisad in sidaas ma aha jeclaan of loo qabsan ordaa, isku dayaan in ay gudaha iyaga kicin. Alaabada lagu ciyaaro ee lagu beddelo is-beddelka ayaa ku imaan kara qaab xashiishka boodhka ah tusaale ahaan! i aamini… Waxaan leeyahay waayo-aragnimo in Tegay xayawaanka!
Butros Talooyin 4: Safaaradda Research Shuruudaha
dalal kala duwan waxay leeyihiin shuruudo kala duwan. Waddamo badan oo u baahan waqti karantiil, sidaa darteed haddii aad rabto in aad waqti Tegay xayawaankaaga, hubi in aad double-hubi this! Inta badan wadamada waxay u baahan yihiin in tallaaladaas raabiyada, bordetella (qufac guri eey), iyo parvo. Wac safaarad iyo sameeyo cilmi-online si aad u aragto waxa looga baahan yahay ee dalka yihiin, iyo in la hubiyo in aad waraaqaha ku anfacaya marka gudbayay xadka.
Waad ku baari kartaa safarka xayawaanka rabaayadda ah iyo shuruudaha waddanka PetTravel.com.
5. Hel A Shahaadada Caafimaadka
shahaadooyinka caafimaadka waxaa looga baahan yahay by diyaaradaha, ilaalaha xuduudaha, hotels, xarumaha xayawaanka-daryeelka, iyo kuwa kale marka la xayawaanka aad u safraan. Marar badan, marka la xayawaanka safar aad u baahan tahay si aad u hesho shahaadada caafimaadka gudahood 10 maalmood laga bilaabo safarkaaga. Baaritaan shuruudaha gaarka ah ee aad faahfaahin ka hor booqashada xayawaannada, si ay u ka mid noqon kara wax kasta oo loo baahan yahay in shahaadada.
6. Ka dhig An Electronic Copy Of Your Certificate Butros Caafimaadka
hotels badan oo, ka shaqeeya safarada, xarumaha daryeelka salaaxid, diyaaradaha, iyo caadooyinka iyo hay'adaha socdaalka looga baahan yahay diiwaanka daabacan oo ah shahaadada caafimaadka xoolaha xayawaanka. Halkii daabacaadda off reams koobi tusaale kasta oo macquul ah, daabacan off laba iyo nuqul elektaroonik ah marka la xayawaanka safraya.
Myscha Theriault waa qoraa iibka ugu wanaagsan iibiya isla markaana caalami ah oo u safraya warqadaha safarka oo si buuxda ula safraya saygeeda suxufiga sayniska iyo ninkeeda weyn ee Labrador. Iyada oo iyada nuqul elektaroonik ah ku anfacaya, iyadu mar walba diyaar u yahay inuu soo saaro, iyada oo eey ee shahaadooyinka caafimaadka sida loogu baahan yahay.
“printer xarunta ganacsiga hotel ee ay ii ogolaaneysaa inaan daabaco nuqul PDF diiwaanka tallaalka our Labrador ayaa ah sida loo baahan yahay, tusaale ahaan mar kasta oo aan u baahan tahay inaad ballan gelinka dambe ah xanaanada iyada waddada. Waxaa xajiya aruuray warqad hoos maalin ka maalin ah, halka inta soo hartay loo diyaariyey daqiiqadii ugu danbeysay- isbeddel ah ee our jadwalka.”
Hadiiba ay dhacdo wax ku dhacaan wadada, aadan rabin in ay gurguurato in la helo xoolaha a sumcad. Qor macluumaadka xiriirka ee ah vets yar ee degaanka aad booqashada ka hor inta aanad bilaabin Tegay xayawaanka.
Waxaan rajaynaynaa, kuwaas oo Talooyin Top for Tegay xayawaankaaga guriga ayaa si sahlan dareemayaasha aad yara! Noo soo sheeg haddii aad qabto wax talooyin kale oo sare si ay ula wadaagaan Save A tareenka iyo bulshada. Waxaan jeclaan lahaa inaan war idinka maqlo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Talooyin Top Waayo, Iyadoo Your Xayawaanka Socdaalka” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#xayawaan xayawaan #xayawaanka #bisadaha #eeyaha #xayawaannada #pettips #waraaqaha safarka #safarada europetravel trainjourney